(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 02/08/2021)
Mhlawumbi awufuni ukuba ezi yamashwa nto yenzeke kuwe, kodwa kufuneka bazilungiselele kungenzeka ukuba, okanye umntu omthandayo, uya kufuna unyango ngexesha kude nekhaya. Nokuba nje elula NOKUCUKUCEZA izinyo lakho, spraining iqatha lakho, esihla nomkhuhlane, okanye ukuhlaselwa yintliziyo, ezifumana unyango kufuneka Bangabi lula njengoko uya kuba eUnited States.
Ngakumbi ulwazi malunga nokuhamba i-inshurensi yezonyango kwaye kutheni kufuneka ucinge ngokuyifumana, jonga kwisikhokhelo ngezantsi.
• Iindawo ezinika umdla inshorensi yonyango kwahlukile nkqubo zesezantsi i-inshorensi umdla kakhulu ukuba ayenzi azibandakanyi ukuba iindleko ezinxulumene barhoxa, ukulibaziseka, okanye ukuphazamiseka.
• Le nkqubo ngokuqhelekileyo ukunika ingxelo ngenxa yesenzo eso abajongwa iqhosha zonyango iindleko. Ezi ziquka Utyelelo kwigumbi labagula, Iinkonzo zokufudusa, yaye zokuhamba iindleko ezenziweyo ukufikelela kumaziko onyango afanelekileyo.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Elona Okuchukumisayo Universities EYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-need-for-travel-medical-insurance%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)